တကယ်ရှိတယ်လို့ပြောရင်ယုံကြည်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့ လူကောင်အကြီးဆုံးအမျိုးသမီး ၉ယောက် - CantWait2Say
တကယ်ရှိတယ်လို့ပြောရင်ယုံကြည်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့ လူကောင်အကြီးဆုံးအမျိုးသမီး ၉ယောက်
General knowledge January 28, 2018
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထက် ၂ဆ ၃ဆလောက်ကြီးတဲ့လူအကြီးကြီးတွေရှိတယ်ဆိုတာသိပါသလား?လူကောင်ကြီးကြီးအရပ်ရှည်ရှည်တွေဆိုရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာသာမြင်ဖူးခဲ့ကြတာ။ဒါပေမဲ့ အပြင်လောကမှာလည်း ကိုယ်တွေထက် ၂ဆ ၃ဆကြီးတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။မရှိနိုင်ဘူးလို့ထင်နေရင် ဒီအောက်ကစာတွေ၊ပုံတွေကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး!
၁။Yao Defen (China)
တရုတ်နိုင်ငံက Yao Defen ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ အရပ်ဟာ ၇ပေ ၈လက်မတောင်ရှိပါတယ်။သူမကိုကမ္ဘာပေါ်မှာအရပ်အရှည်ဆုံးအမျိုးသမီးလို့တောင်ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူမဟာဆင်းရဲတဲ့မိသားစုထဲမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး တခြားကလေးတွေက် ၃ဆလောက်ပိုပြီးမစားခင်ကပုံမှန်အရွယ်အစားလောက်ပဲရှိပါတယ်။အသက် ၁၁နှစ်အရွယ်မှာ သူမရဲ့ အရပ်က ၆ပေ ၂လက်မရှိနေပါပြီ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အရပ်ပိုရှည်လာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံး ၇ပေ၈လက်မအထိရှည်လာခဲ့ပါတယ်။စိတ်မကောင်းစရာကတော့သူမဟာအသက် ၄၀အရွယ်၊၂၀၁၂ခုနှစ်မှာသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
၂။Margo Dydek (Poland)
Margo Dydek ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာနာမည်ကြီး ဘတ်စကတ်ဘောကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ အရပ်က ၇ပေ ၂လက်မတောင်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘတ်စကတ်ဘောအမျိုးသမီးတွေထဲမှာအရပ်အရှည်ဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာလည်း ၂၀၁၁မှာ နှလုံးရှော့ခ်ဖြစ်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။သားလေးနှစ်ယောက်နဲ့အတူခင်ပွန်းဖြစ်သူကတော့ သြစတေးလျမှာနေထိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။
၃။Malee Duangdee (Thailand)
Malee Duangdee ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာ ၂၀၁၆သြဂုတ်လမတိုင်ခင်အထိ ထိုင်းနိုင်ငံမှာအရပ်အရှည်ဆုံးအမျိုးသမီး၊အာရှမှာဒုတိယအရပ်အရှည်ဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ အရပ်က ၆ပေ၁၀လက်မရှိတာသူမအတွက်ကံကောင်းမှုတစ်ခုပါပဲ။အရပ်ပိုရှည်လေ နှလုံးရှော့ခ်ဖြစ်နိုင်ချေများလေပါတဲ့။
၄။Sun Fang (China)
Sun Fang ကို ၈၇ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမဟာ အခုလောလောဆယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အရပ်အရှည်ဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်နေပါတယ်။သူမရဲ့အရပ်အမြင့်က ၇ပေ ၃လက်မရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ခါတစ်ရံတော့ Yao Defen ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့မှားလေ့ရှိပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်က နည်းနည်းဆင်တူသလိုပါပဲ။
၅။Alicia Jay (United States)
သူမရဲ့ အရပ်အမြင့်ဟာ ၆ပေ၆လက်မရှိပြီး ဘတ်စကတ်ဘောကစားသမားတစ်ယောက်ပါ။နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ဖက်ရှင်ဘလော့ဂါတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမက နာမည်ကြီးပေမဲ့လည်း သူမရဲ့ အရပ်ကြောင့်ချစ်သူရည်းစားတွဲရတာအဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့် သူမနဲ့မှန်ကန်သင့်တော်တဲ့ချစ်သူတစ်ယောက်ကိုစောင့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။
၆။Rumeysa Gelgi (Turkey)
Rumeysa Gelgi ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာ ရှားပါးရောဂါလို့အသိများတဲ့ Weaver Syndrome ရောဂါကိုခံစားနေရပါတယ်။ကြီးထွားနှုန်းမြန်တဲ့ရောဂါတစ်ခုပေါ့။သူမဟာ အရပ်အမြင့် ၇လက်မနဲ့ ကမ္ဘာ့အရပ်အရှည်ဆုံးဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်အဖြစ်အားလုံးကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။တစ်ချို့အရပ်ပုတဲ့လူတွေကသူမကိုကံကောင်းတယ်ထင်ပေမဲ့သူမဟာ ကမ္ဘာ့ဆွဲအားကြောင့်နာကျင်မှုကိုခံစားနေရပြီးလမ်းလျှောက်တုန်းကိုသုံးပြီးသွားနေရပါတယ်။
၇။Elisany Silva (Brazil)
အသက် ၁၈နှစ်အရွယ်ဘရာဇီးမော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Elisany ဟာအရပ်အမြင့် ၆ပေ ၉လက်မရှိပါတယ်။သူမဟာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သာရှိသေးပေမဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့လည်းစဉ်းစားနေပြီးကလေးတွေပါယူမယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သူမဟာ ကျူမာရောဂါခံစားနေရတာကြောင့် ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ မွေးဖွားဖို့အခွင့်အရေးလည်းရှိပါသေးတယ်။
၈။Uliana Semionova (Soviet Union)
Uliana Semionova ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာ ၇၀ခုနှစ်၊၈၀ခုနှစ်မှာ ဆိုဗီယက်လက်ဗီယန်ဘတ်စကတ်ဘောကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဗီယက်ယူနီယံနဲ့ဥရောပချန်ပီယံရှစ်စ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရခဲ့သူဖြစ်ပြီး ၁၉၇၆၊၁၉၈၀အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ အရပ်အမြင့်ဆုံးဘတ်စကတ်ကစားသမားမဟုတ်ပေမဲ့သူမရဲ့ ဖိနပ်ဆိုဒ်ကတော့ ယူအက်စ်မှာရောဥရောပမှာပါ အကြီးဆုံးဆိုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
၉။Zeng Jinlian (China)
သူမဟာ အရပ်အမြင့် ၈ပေရှည်လျားတဲ့လူစုစုပေါင်း၁၇ယောက်ရှိတဲ့အထဲမှာမှ Zeng ဟာ တစ်ယောက်အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။Zeng ဟာ အရပ်အမြင့် ၈ပေ၂လက်မရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ သူမဟာအသက် ၁၈နှစ်ပြည့်အောင်တောင်မနေခဲ့ရပါဘူး။သူမရဲ့အသက် ၁၇နှစ်၊၁၉၈၂မှာ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
တကယျရှိတယျလို့ပွောရငျယုံကွညျနိုငျမှာမဟုတျတဲ့ လူကောငျအကွီးဆုံးအမြိုးသမီး ၉ယောကျ
သငျ့ခန်ဓာကိုယျထကျ ၂ဆ ၃ဆလောကျကွီးတဲ့လူအကွီးကွီးတှရှေိတယျဆိုတာသိပါသလား?လူကောငျကွီးကွီးအရပျရှညျရှညျတှဆေိုရုပျရှငျကားတှထေဲမှာသာမွငျဖူးခဲ့ကွတာ။ဒါပမေဲ့ အပွငျလောကမှာလညျး ကိုယျတှထေကျ ၂ဆ ၃ဆကွီးတဲ့လူတှရှေိပါတယျ။မရှိနိုငျဘူးလို့ထငျနရေငျ ဒီအောကျကစာတှေ၊ပုံတှကေိုဖတျကွညျ့လိုကျပါဦး!
တရုတျနိုငျငံက Yao Defen ဆိုတဲ့အမြိုးသမီးရဲ့ အရပျဟာ ရပေ ၈လကျမတောငျရှိပါတယျ။သူမကိုကမ်ဘာပျေါမှာအရပျအရှညျဆုံးအမြိုးသမီးလို့တောငျချေါခဲ့ကွပါတယျ။သူမဟာဆငျးရဲတဲ့မိသားစုထဲမှာမှေးဖှားခဲ့တာဖွဈပွီး တခွားကလေးတှကျေ ၃ဆလောကျပိုပွီးမစားခငျကပုံမှနျအရှယျအစားလောကျပဲရှိပါတယျ။အသကျ ၁၁နှဈအရှယျမှာ သူမရဲ့ အရပျက ၆ပေ ၂လကျမရှိနပေါပွီ။တဖွညျးဖွညျးနဲ့အရပျပိုရှညျလာခဲ့ပွီးနောကျဆုံး ရပေ၈လကျမအထိရှညျလာခဲ့ပါတယျ။စိတျမကောငျးစရာကတော့သူမဟာအသကျ ၄၀အရှယျ၊၂၀၁၂ခုနှဈမှာသဆေုံးသှားခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။
Margo Dydek ဆိုတဲ့အမြိုးသမီးဟာနာမညျကွီး ဘတျစကတျဘောကစားသမားတဈယောကျဖွဈပါတယျ။သူမရဲ့ အရပျက ရပေ ၂လကျမတောငျရှိတယျလို့သိရပါတယျ။ပရျောဖကျရှငျနယျဘတျစကတျဘောအမြိုးသမီးတှထေဲမှာအရပျအရှညျဆုံးအမြိုးသမီးတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။သူမဟာလညျး ၂၀၁၁မှာ နှလုံးရှော့ချဖွဈပွီးသဆေုံးသှားခဲ့ပါတယျ။သားလေးနှဈယောကျနဲ့အတူခငျပှနျးဖွဈသူကတော့ သွစတေးလမြှာနထေိုငျတယျလို့သိရပါတယျ။
Malee Duangdee ဆိုတဲ့အမြိုးသမီးဟာ ၂၀၁၆သွဂုတျလမတိုငျခငျအထိ ထိုငျးနိုငျငံမှာအရပျအရှညျဆုံးအမြိုးသမီး၊အာရှမှာဒုတိယအရပျအရှညျဆုံးအမြိုးသမီးဖွဈခဲ့ပါတယျ။သူမရဲ့ အရပျက ၆ပေ၁၀လကျမရှိတာသူမအတှကျကံကောငျးမှုတဈခုပါပဲ။အရပျပိုရှညျလေ နှလုံးရှော့ချဖွဈနိုငျခမြေားလပေါတဲ့။
Sun Fang ကို ၈၇ခုနှဈမှာမှေးဖှားခဲ့တာဖွဈပွီးသူမဟာ အခုလောလောဆယျတရုတျနိုငျငံရဲ့ အရပျအရှညျဆုံးအမြိုးသမီးဖွဈနပေါတယျ။သူမရဲ့အရပျအမွငျ့က ရပေ ၃လကျမရှိတယျလို့သိရပါတယျ။တဈခါတဈရံတော့ Yao Defen ဆိုတဲ့အမြိုးသမီးနဲ့မှားလရှေိ့ပါတယျ။သူတို့နှဈယောကျက နညျးနညျးဆငျတူသလိုပါပဲ။
သူမရဲ့ အရပျအမွငျ့ဟာ ၆ပေ၆လကျမရှိပွီး ဘတျစကတျဘောကစားသမားတဈယောကျပါ။နာမညျကြျောကွားတဲ့ဖကျရှငျဘလော့ဂါတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။သူမက နာမညျကွီးပမေဲ့လညျး သူမရဲ့ အရပျကွောငျ့ခဈြသူရညျးစားတှဲရတာအဆငျမပွခေဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါကွောငျ့ သူမနဲ့မှနျကနျသငျ့တျောတဲ့ခဈြသူတဈယောကျကိုစောငျ့နတေယျလို့သိရပါတယျ။
Rumeysa Gelgi ဆိုတဲ့အမြိုးသမီးဟာ ရှားပါးရောဂါလို့အသိမြားတဲ့ Weaver Syndrome ရောဂါကိုခံစားနရေပါတယျ။ကွီးထှားနှုနျးမွနျတဲ့ရောဂါတဈခုပေါ့။သူမဟာ အရပျအမွငျ့ ရလကျမနဲ့ ကမ်ဘာ့အရပျအရှညျဆုံးဆယျကြျောသကျတဈယောကျအဖွဈအားလုံးကသတျမှတျထားပါတယျ။တဈခြို့အရပျပုတဲ့လူတှကေသူမကိုကံကောငျးတယျထငျပမေဲ့သူမဟာ ကမ်ဘာ့ဆှဲအားကွောငျ့နာကငျြမှုကိုခံစားနရေပွီးလမျးလြှောကျတုနျးကိုသုံးပွီးသှားနရေပါတယျ။
အသကျ ၁၈နှဈအရှယျဘရာဇီးမျောဒယျလျတဈယောကျဖွဈတဲ့ Elisany ဟာအရပျအမွငျ့ ၆ပေ ၉လကျမရှိပါတယျ။သူမဟာ ဆယျကြျောသကျအရှယျသာရှိသေးပမေဲ့ မင်ျဂလာဆောငျဖို့လညျးစဉျးစားနပွေီးကလေးတှပေါယူမယျလို့ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ဒါပမေဲ့ သူမဟာ ကြူမာရောဂါခံစားနရေတာကွောငျ့ ပွဿနာတဈခုခုဖွဈမှာကိုစိုးရိမျနပေါတယျ။ဒါပမေဲ့ မှေးဖှားဖို့အခှငျ့အရေးလညျးရှိပါသေးတယျ။
Uliana Semionova ဆိုတဲ့အမြိုးသမီးဟာ ရ၀ခုနှဈ၊၈၀ခုနှဈမှာ ဆိုဗီယကျလကျဗီယနျဘတျစကတျဘောကစားသမားတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ဆိုဗီယကျယူနီယံနဲ့ဥရောပခနျြပီယံရှဈဈပွိုငျပှဲတှမှောအနိုငျရခဲ့သူဖွဈပွီး ၁၉၇၆၊၁၉၈၀အိုလံပဈပွိုငျပှဲတှမှောလညျးရှတေံဆိပျဆုရရှိခဲ့သူဖွဈပါတယျ။သူမဟာ အရပျအမွငျ့ဆုံးဘတျစကတျကစားသမားမဟုတျပမေဲ့သူမရဲ့ ဖိနပျဆိုဒျကတော့ ယူအကျဈမှာရောဥရောပမှာပါ အကွီးဆုံးဆိုဒျဖွဈပါတယျ။
သူမဟာ အရပျအမွငျ့ ၈ပရှေညျလြားတဲ့လူစုစုပေါငျး၁၇ယောကျရှိတဲ့အထဲမှာမှ Zeng ဟာ တဈယောကျအပါအဝငျဖွဈပါတယျ။Zeng ဟာ အရပျအမွငျ့ ၈ပေ၂လကျမရှိပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ကံမကောငျးစှာနဲ့ပဲ သူမဟာအသကျ ၁၈နှဈပွညျ့အောငျတောငျမနခေဲ့ရပါဘူး။သူမရဲ့အသကျ ၁၇နှဈ၊၁၉၈၂မှာ သဆေုံးသှားခဲ့ပါတယျ။
မိုက်ရူးရဲဆန်သူတွေရဲ့ ကြောက်လန့်ဖွယ် ဓာတ်ပုံတွေ
မိုက်ရူးရဲဆန်သူတွေရဲ့ ကြောက်လန့်ဖွယ် ဓာတ်ပုံတွေ အခုဖော်ပြမယ့်ပုံတွေကတော့ မိုက်ရူးရဲဆန်သူတွေရဲ့ ဘဝတစိတ်တပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာ ငွေကြေးကြောင့် ဝါသနာကြောင့် သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်ကြောင့် ရူးသွပ်စာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပြီး နာမည်ကြီးလိုစိတ်မရှိခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ပုံတွေကို မြင်လို့ ရိုက်မိသူက လိုင်းပေါ်တင်ခဲ့ရာက သူတိ်ု့ရဲ့ မိုက်၇ူးရဲဆန်မှုတွေကို လူတွေ သိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ 1 ဒီအမျိုးသားကတော့ အဲ့ဒီလို အသက်နဲ့ရင်းပြီး ပိုက်ဆံရှာတဲ့ …
သမန်းဝံပုလွေ အကြောင်း သိကောင်းစရာများ
သမန်းဝံပုလွေ အကြောင်း သိကောင်းစရာများ သမန်းဝံပုလွေနဲ့ သမန်းကျားတွေဟာ ရိုးရာပုံပြင်တွေ ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ ကိုယ်တွေ အဖြစ်အပျက်တွေ ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆို လူယောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ ငမိုးရိပ်လို မိချောင်းကြီးတွေ မြွေတွေတောင် ရျိတယ်လို့ အယူအဆရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို သမန်းဝံပုလွေတွေရဲ့ အကြောင်းကို နိုင်ငံတကာက အယူအဆတွေ ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1 ရှေးဟောင်း အင်ဒိုနဲ့ …
အရင်ခေတ်က ထူးခြားဆန်းကြယ်သော လူထူးလူဆန်းများ
1 မုတ်ဆိတ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးလို့ သိကြတဲ့ Annie Jones ကတော့ ပီ. တီ ဘာနမ်နဲ့ လှည့်လည်သွားလာခဲ့ပြီးတော့ နိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်း မုတ်ဆိတ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီးတော့ ဘာနမ်ရဲ့ ထူးခြားဆန်းကျယ်ကွန်ဂရက်တွေရဲ့ ပြောဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်လာပါတယ်။2၁၈၁၁ခုနှစ် ထိုင်းမှာမွေးခဲ့တဲ့ Chang နဲ့ Eng Bunker တို့ဟာလည်း သုံးနှစ်လောက် …